SNAX account ဖွင့်​ကြည့်​ခြင်း by aunggyi100 | Steem
SNAX account ဖွင့်​ကြည့်​ခြင်း by aunggyi100
myanmar · @aunggyi100 · May 11 '19 (edited)
SNAX account ဖွင့်​ကြည့်​ခြင်း
SNAx​ airdrop  ရလိုရငြား ပထမ ပို့စ်​တစ်​ခုတင်​ခဲ့ပါသေးသည်​။စာလုံး​ရေ တစ်​​ထောင်​တင်​ရမည်​ဟူကား မသိ၍ ​ရေးသားခဲ့သည့်​အတိုင်းတင်​ခဲ့မိပါသည်​။စုံစမ်း​မြေးမြန်းခြင်း မပြုဘဲ ​ရေးတင်​ခဲ့မိသည်​ကား မိမိ၏အမှားပင်​။
မိမိပို့စ်​​လေး snax ၏စရင်း၌ပါမလာသည်​မှာ ကြာလာ​​​သောအခါမှသာ ကိုဒိုမီ ပို့​အောက်​၌ comment ​လေး​ရေးကာ ​မေးမြန်း​ရေ​လေ​တော့သည်​။
မြန်မာစကားပုံထဲကလိုပင်​ ဆရာ မပြလျှင်​ ငပိ​တောင်​ ​​ဖြောင့်​​အောင်​မဖုတ်​တတ်​ ဆိုသည်​ကား မှန်​​ပေသည်​။ ကိုဒိုမီရှင်းပြ​လေမှ snax airdrop အ​ကြောင်းစလုံး​ရေ တစ်​​ထောင်​ပြည့်​​အောင်​ ​ရေးကာ ​နောက်​တစ်​ပို့စ်​အား ယခုပင်​​ရေးရ​ပေ​တော့သည်​။ ထိုသို့ရေးသားရာ၌လည်း ပထမပို့စ်​ တွင်​ပါ​သော အ​ကြောင်းအရာများစွာပါဝင်​ကာ copy post ဖြစ်​သွားမည်​ကိုလည်း ​ကြောက်​ရ​သေး​ပေသည်​။
SNAX အ​ကောင့်​ စတင်​ဖွင့်​သူများအတွက်​ 50 SNAX ရရှိကြမည်​အား ​တော်​​​တော်​များများလည်း သိရှိကြပြီးဖြစ်​​ပေမည်​။
ထိုရရှိလာ​သော snax များအား လွှဲ​ပြောင်း​ပေးခြင်း လက်​ခံရယူခြင်းတို့အား မိမိအ​ကောင့်​အတွင်း၌ပင်​ စိတ်​ကြိုက်​ပြုလုပ်​နိုင်​​သေး၏။
အကယ်​၍ လူကြီးမင်းတို့ အ​ကောင့်​ဖွင့်​ကြည့့်​၍ အရှိလာ​သော snax များအား aung1a အ​ကောင့်​သို့ လွဲ​ပေးခဲ့လျှင်​မူ လုံးဝ စိတ်​ဆိုးမည်​မဟုတ်​​ပေ။
SNAX account စတင်​ဖွင့်​မည့်​သူများသည်​ Twitter account တစ်​ခု မဖြစ်​မ​နေလိုအပ်​ပေသည်​။ Twitter account ဖြင့်​ချိတ်​ဆက်​၍ ဖွင့်​ရသော​ကြောင့်​ဖြစ်​​ပေ၏။
ကျွန်​​တော်​တို့အဖွဲ့မှ လူ​တော်​​တော်​များများသည်​ကား snax account များ လုပ်​၍ပြီးစီးကြ​လောက်​​ပေမည်​။
Snax အ​ကြောင်းအား ရှင်းပြ ​ပြောပြ​ပေးခဲ့သူအားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ပါသည်​။
ဤပို့စ်​​ကား snaxနှင့်​ပတ်​သတ်​၍ ကျွန်​​တော်​၏ ဒုတိယ​မြောက်​ပို့တစ်​ခုပင်​ဖြစ်​​ပေ​တော့၏။
အကယ်​၍ စိတ်​ဝင်​စားကာ ဖွင့်​ကြည့်​လိုလျှင်​
အောက်​ပါလင့်​မှ ဝင်​​ရောက်​၍ အ​ကောင့်​ဖွင့်​နိုင်​ပါသည်​။
👍 komoezaw, billionairehein, sawlwin, zinminhtet, thatkozaw, suhlaing, steempowergroup1, nyinyiwin, myothuzar, aunggyi100, myanmarkoko, caesarsupaimin, saipanpha, honeysara, aggamun, linthitsar, hein.khant, minhtet, thanlwin, zawmyintkhaing, khatwai, panpan24, koayezaw, shwemon, hanobooy, naruhokage, hoverbooker, jacklin19, phantomassassine, snowred, monst, soulkeeper, pcwor, nrlio, desg, plo, smiing11, liongyi, jamunawng, sasansam, thinzarnyinyi, golden-myanmar, glorialion, joot, steeming-hot
"SNAX account ဖွင့်​ကြည့်​ခြင်း"
caesarsupaimin0B 4,104,317,377 50%
komoezaw0B 23,986,535,228 100%
nyinyiwin0B 5,154,677,016 50%
myothuzar0B 4,610,988,828 100%
honeysara0B 1,841,570,918 100%
zinminhtet0B 6,905,216,155 100%
myanmarkoko0B 4,227,982,129 100%
suhlaing0B 6,645,100,936 50%
sawlwin0B 11,450,451,042 60%
billionairehein0B 16,968,319,265 60%
aggamun0B 1,706,617,828 15%
aunggyi1000B 4,378,869,809 100%
jamunawng0B 247,175,986 50%
smiing110B 247,962,148 50%
shwemon0B 268,437,665 100%
glorialion0B 247,173,902 50%
golden-myanmar0B 247,173,902 50%
steempowergroup10B 5,230,418,918 100%
thinzarnyinyi0B 247,173,902 50%
liongyi0B 247,770,651 50%
panpan240B 544,173,479 100%
sasansam0B 247,173,902 50%
plo0B 247,983,894 50%
desg0B 247,983,894 50%
nrlio0B 247,983,894 50%
pcwor0B 247,983,894 50%
soulkeeper0B 247,983,894 50%
joot0B 246,586,590 50%
monst0B 247,983,894 50%
snowred0B 247,983,894 50%
phantomassassine0B 247,983,894 50%
jacklin190B 247,983,894 50%
hoverbooker0B 247,983,894 50%
naruhokage0B 247,983,894 50%
hanobooy0B 247,983,894 50%
hein.khant0B 949,235,879 100%
@nyinyiwin · May 11 '19
လုပ်ပီးရရင် လွှဲပေးပါနော် နော် :P
@honeysara · May 11 '19
တတိယမြောက်ပိုစ့် ထပ်ရေးလဲရတယ်တဲ့ hee
@steemitboard · Jun 9
Congratulations @aunggyi100! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/https://steemitboard.com/@aunggyi100/votes.png?201906090845"></td><td>You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.</td></tr>
<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@aunggyi100) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=aunggyi100)_</sub>